प्रगति राई, दक्षिण कोरिया
[2013-03-06 오후 9:27:00]
-आमा मरे टुहुरो बाबु मरे गोहोरो:
उखानले परिवारमा आमाको स्थान उच्च देखाउँछ । यो संसारको सुरुवात नै महिलाबाट भयो । महिलाले आमा हुन पाउने अधिकार प्रकृतिबाटै पाईन्, जो अहिलेसम्म त्यो स्थान पुरुषले ओगट्न सक्दैन । यो अर्थमा महिलाले पुरुषलाई 'किन पछि परेको?' भनेर कहिल्यै सोधेको छैन । किन भने महिलाले बुझ्दछ कि यो कर्त्यव्य प्रकृतिले महिलालाई दिएको छ । त्यसैले यो संसार भराउनमा महिला यति व्यस्त रहिन् कि उनले बाहिर के हुदैछ हेर्ने फुर्सद रहेन, उनका साथमा पुरुष थिए- पुरुषले परिवारका बाहिरी देखबहालको काम गर्‍यो । यसरी संसार मज्जाले चल्दै आइरह्यो ,यसैले हामी यो सांसारिक भीडभाडमा छौँ ।
तर समय अचानक यस्तरी उल्टियो कि अहिले महिलाको पहिचान आमा हुन मात्रै होइन: बाहिरी समाजमा पनि उनको व्यग्र खोजि हुन थाल्यो या समयले देख्न्न चाह्यो,-'महिला कहाँ छे?'यसैले अब, महिलाले दरबारिया सुखबालाई थोरै पर सारेर गेटबाहिरको सिरेटोसँग पौंठेजोरी खेल्न तयार हुन पर्‍यो ।
महिला बाहिरी संसारमा आउनको लागि समय र अवशरको आवश्यकता छ । यो अवशर र समय स्वमित्वले निर्धारण गर्दछ, जसको लागि महिलामा वंशाधिकार आवश्यक छ ।
-वंश कै निमित्त महिलाले पराइघर जानुपर्छ । पराइघर जाने भएकै कारण उसका लागि अग्रीम जिन्दगीको खाका न अभिभावकले कोर्न सिकाउछन् न उसलेनै सिक्दछे । जब जवान हुन्छन्- पराईघरको रितिरिवाज, भरणपोषण गर्दैमा जीवन अन्तिम अवस्थामा पुग्छ । जब, ऊ स्वत्रन्त्र हुन्छे उसलाई समयले धेरै पछि पारिसकेको हुनेछ । यसर्थ, महिलामा पनि बंशाधिकार रह्यो भने यी कुराहरूबाट महिला फुर्सद पाउनेछिन् र बाहिरको परिवेशमा उसको अभ्यास रहनेछ ।
महिलाको जीवन नै बक्र रेखामा हिड्दछ । महिनावरी हुनु, बच्चालाई दस महिना गर्भमा हुर्काउनु, त्यसपछि कम्तिमा पाँच वर्ष भरण-पोषण गर्नुपर्ने भएकाले पुरुषको तुलनामा महिलालाई समय धेरै लाग्दछ । यतिधेरै जिम्मेवारीको भार बोक्ने मान्छे यी कुनै अवरोध विहीन हिड्ने पुरुषसँग महिलाको तुलना गर्नु महा मुर्ख्याइँ हो । आजसम्म हामीले कराइरहेको 'समान अधिकार-समान अधिकार' नारा एकदम अव्यवहारिक छ ? सयौं जिम्मेवारी बोकेर हिंड्नुपर्ने महिलाले एउटा स्वतन्त्र पुरुषसँग मात्रै समान अधिकार खोजेर कति परिवर्तन आउँदैन । महिलालाई त पुरुषभन्दा विशेष अधिकार चाहिन्छ, ? यो विषयमा हाम्रो ध्यान पुग्न जरुरी छ । यसर्थ, कुनै पनि सय प्रतिशतको मापदण्डले पाउने सुविधामा महिलाको हकमा असी प्रतिशत बनाउनुपर्छ ।